Filimada la daawado ka hor intaadan aadin Paris si aad si fiican magaalada ugu barato | Wararka Safarka
Luis Martinez | 09/06/2021 11:49 | dhaqanka, Paris
Haddii aad ka yaaban tahay filimada la arko ka hor intaadan aadin Paris, waa sababta oo ah waxaad qorsheyneysaa safar aad ku tageyso caasimadda Faransiiska. Kama qoomameyn doontid wicitaanka Magaalada Iftiinka Waa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan adduunka. Waxaa ka buuxa taalooyin iyo sheekooyin halyeeyo ah oo ku soo jiidan doona, laakiin sidoo kale waa magaalo casri ah oo leh wax kasta oo aad ugu baahan tahay joogitaan lama iloobaan ah.
Sikastaba, filimada la arko ka hor intaadan aadin Paris in aan soo qaadaneyno waxaad ku siin doontaa aragti ka duwan magaalada Seine. Iyaga, waad ku sahmin kartaa ka hor intaadan guriga ka tegin oo waxaad ogaan kartaa kooneyaal, laga yaabee, inaadan xitaa ogeyn inay jiraan. Laakiin ma ahan waqtigii la ballaarin lahaa, iyada oo aan la sii ambo qaadin, waxaan kuu soo jeedin doonnaa filimada aad arki doonto ka hor intaadan aadin Paris.
1 Filimmada la arko ka hor intaadan aadin Paris, dalxiis dalxiis oo magaalada ah
1.1 Hunchback ee Notre Dame
1.2 Marie Antoinette, filim kale oo la arko kahor inta aysan aadin Paris si ay wax uga ogaato taariikhdeeda
1.5 Amelie, oo ah filim ka mid ah filimada la arko ka hor intaadan aadin Paris
1.6 Nolol casaan
1.7 Ratatouille, ku biirinta animation ee filimada si aad u aragto ka hor intaadan aadin Paris
Filimmada la arko ka hor intaadan aadin Paris, dalxiis dalxiis oo magaalada ah
Socdaalkayaga filimadii ugu fiicnaa ee lagu dejiyay Paris wuxuu kuu geyn doonaa waqtiyadii la soo dhaafay halkaas oo aad ka baran doonto taariikhdooda, laakiin sidoo kale ilaa waqtigan la joogo, si aad u ogaato waxa ay yihiin meelahaas soo jiidasho leh taas oo aan ka muuqan hagayaasha dalxiiska. Aan la tagno cajaladaha aan soo jeedineyno.
Hunchback ee Notre Dame
Iyada oo ku saleysan sheeko aan caadi ahayn Marwadayada paris ee ugu weyn Víctor Hugo, in kabadan hal filim waxaa jira dhowr. Waxaa laga yaabaa in midka ugu caansan uu yahay muuqaalka filimka ee ay soo saartay Disney sanadkii 1996. Waxay dib noogu celineysaa waqtiyadii dhexe si aan ugu sheegno sheekada hunchback Quasimodo iyo gypsy-ka quruxda badan ee Esmeralda, kuwaas oo ku lug leh shirqool jacayl, ciil iyo aargoosi.
Waxaas oo dhan waxay la socdaan Notre Dame, kaniisadda ugu caansan ee ku taal Paris, oo ah masraxa dhexe. Marka la soo koobo, sheeko qurux badan oo aan lahayn astaamo shar leh oo marar badan la keenay shaashadda weyn.
Haddii aad doorbideyso inaad ku aragto nooc jilayaasha dhabta ah, waxaad leedahay tusaale ahaan carrab la ' Marwadayada paris, laga soo bilaabo 1923 oo uu hagayey Wallace Worsley. Turjumaanadiisu waxay ahaayeen Lon Chaney sida Quasimodo iyo Patsy Ruth Miller oo ah Esmeralda. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto nooc cod ah, waxaan kugula talineynaa filimka isla cinwaanka cinwaanka ee 1956 oo leh Anthony Quinn doorka hunchback iyo Gina Lollobrigida sida Esmeralda. Xaaladdan oo kale, jihada waxay ahayd Faransiis Jean Delannoy.
Marie Antoinette, filim kale oo la arko ka hor intaadan aadin Paris si ay u bartaan taariikhdeeda
Sheekada xaaska xanuunsan ee Louis XVI ee Faransiiska sidoo kale marar badan ayaa la keenay shaashadda weyn. Waxaan kuu soo bandhigeynaa nooca uu faray 2006 dii Sofía Coppola si sax ah cinwaankeedu yahay Marie Antoinette. In kasta oo ay diiradda saareyso nolosha boqoradda, haddana sidoo kale waa hab fiican Baro kacaankii Paris ee dabayaaqadii qarnigii XNUMXaad, qaar badan oo ka mid ah taalooyinkoodii weli way taagan yihiin waadna arki doontaa safarkaaga magaalada.
Doorka aristocrat-ka khaldan waxaa door ka ciyaara Kristen dunst, halka tan ninkeeda, boqorka, uu mas'uul ka yahay Jason Schwartzman. Tirooyinka kale sida Judy Davis, Rip Torn ama Asia Argento ayaa dhameystiraya jilayaasha filimka helay a Oscar naqshadaynta dharka ugu fiican.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad doorbideyso filim caan ah, waxaan kugula talineynaa kii 1939, sidoo kale cinwaan looga dhigay Marie Antoinette. Waxaa agaasime ka ahaa Woodbridge S. Van Dyke, oo ku guuleystay labo abaalmarin oo Oscar ah Cashadii eedaysanaha y San Francisco. Kuwa turjubaanka ah, Norma Shearer Wuxuu ciyaaray boqoradda, halka Robert Morley uu ciyaaray Louis XVI halka Tyrone Power uu ciyaaray Axel von Fersen, oo loo arko inuu boqorka jecel yahay.
Boosto loogu talagalay 'Les Misérables'
Sidoo kale ku saleysan sheeko xushmad leh by Víctor Hugo, mid ka mid ah qorayaashii sida wanaagsan u qabsaday Paris xilligiisii, marar badan ayaa loo qaaday filim iyo telefishanka. Muusiko la garaacay ayaa xitaa la abuuray iyada oo ku saleysan ciyaarta.
Nooca aan halkaan ku keenayno ayaa ah kii uu agaasime ka ahaa 1978 ee Glenn Jordan oo jilaya Richard Jordan doorka Jean Valjean, Caroline langrishe sida Cosette iyo Anthony Perkins sida Javert. Intii filimku socday waxaan markhaati ka nahay dhacdooyin taariikhda Paris ku saabsan sida Kacaankii 1830 iyo, guud ahaan, nolol maalmeedka magaalada Seine ee wakhtigaas.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad doorto filim ahaan waxa aad arki karto ka hor intaadan aadin Paris oo ku saleysan Miserables nooc kale, waxaad dooran kartaa midka la sii daayay 1958. Xaaladdan oo kale, agaasimaha wuxuu ahaa Jean-Paul Le Chanois iyo turjubaano Jean Gabin, Martine Havet iyo Bernard Blier.
Ikhtiyaarka saddexaad waa midka laga duubay telefishanka iyada oo ay ka shaqeynayso Josée Dayan. Jean Valjean waxaa u matalayay Gérard Depardieu, halka Cosette uu ciyaaray Virginie Ledoyen iyo Javert oo uu qoray John Malkovich.
Haddii filimadii hore ay ku tusaan Paris taariikhi ah, Moulin Rouge waxay kaloo kuusoo bandhigaysaa jawiga bohemian ee magaalada dhammaadkii qarnigii XNUMXaad. Iskusoo wada duuboo, tii xaafada farshaxanka ee Montmartre, halkaasoo ay caan ku tahay kabaja caanka ah ee filimka siiya magaciisa ilaa maanta.
Filimkan waxaa agaasime ka ahaa Baz Luhrmann waxaana la sii daayay sanadkii 2001. Wuxuu ka sheekaynayaa nin dhalinyaro ah oo qoraa Ingriis ah oo u guuray magaalada Seine, oo si hufan loogu soo jiitay farshaxanimadiisa farshaxanimada. Moulin Rouge waxaad kula kulmi doontaa dad dhab ah sida ranjiilaha Toulousse Lautrec, laakiin sidoo kale qoob ka ciyaarka Satine, oo uu jacayl la yeelan doono.
Waa filim muusiko ah oo ku siin doona macluumaad muhiim ah oo aad ku ogaan karto xaafadda Montmartre iyo waxa ay tahay inaad ku aragto halkaas markaad tagayso Paris. Laakiin waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad fiiro gaar ah u yeelato dhawaaqeeda xoogga leh, oo ay ku jiraan hits aad u weyn Queen, Elton John o nirvana.
Amelie, filim ka dhex muuqda filimada si aad u aragto ka hor intaadan aadin Paris
Labada Mills Kafee
Filimkan, oo sidoo kale la sii daayay 2001, waa mid ka mid ah talooyinka shineemooyinka oo la arko ka hor intaadan u safrin Paris. Waa majaajillo jaceyl ah oo uu agaasime ka yahay Jean-Pierre Jeunet oo uu jilayo Audrey tatoo.
Waxay isku dhigeysaa kabaha adeegaha ka shaqeeya Labada Mills Kafee iyo inuu ujeedo ka helo noloshiisa markuu go'aansado inuu caawiyo dadka kale si ay uga farxiyaan. Filimku wuxuu ku guuleystay afar abaalmarinood oo César ah wuxuuna u sharraxnaa dhowr abaalmarin oo Oscar ah, in kasta oo aanu helin wax. Laakiin waxaas oo dhan ka sare, waa filim soo jiidasho leh oo guulo waa weyn ka gaadhay dadweynaha.
Sidoo kale waa ku habboon tahay in la ogaado Montmartre, halkaas oo ay ku taal makhaayada ay ka shaqeyso Amelie. Laakiin, si ka duwan tii hore, xaafadda aan ku dhex aragno waa tan hadda jirta. Haddii aad u safarto Paris, sidoo kale wali waad ku cabbi kartaa Café de Los Dos Molinos.
Heesaa Edith Piaf
Haddii Faransiiska guud ahaan iyo gaar ahaan Paris ay astaan ​​ku leeyihiin adduunka heesta, waa Edith Piaf, oo ku dhashay magaalada Seine. Filimkan wuxuu ka sheekeynayaa, si hufan, noloshii heesta tan iyo yaraanteedii xaafad sabool ah oo ku taal magaalada weyn illaa adduunkeedii uu ku guuleysto.
Waxaa agaasime ka ah Olivier Dahan, waxay soo baxday 2007. Laakiin, haddii ay wax taagan yihiin, waa waxqabadka cajiibka ah ee Marion Cotillard doorka heesta. Xaqiiqdii, wuu helay Oscar atariishada ugu fiican waxqabadkiisa, marka lagu daro aqoonsiyo kale oo badan.
Ku soo biiristeeda kooxda jilayaasha waa Gerard Depardieu oo ah Louis Leplée, ganacsade muusig ah oo daah furay Piaf; Clotilde Courau oo doorka hooyada fanka iyo Jean-Pierre Martins u ahaa feeryahan Marcel Cerdan, oo si jaceyl ah ugu lug lahaa heesta diva.
Ratatouille, ku biirinta animation filimada si aad u aragto ka hor intaadan aadin Paris
Sidaad sifiican u ogtahay, Paris waxay tobanaan sano ahayd goobtii cunnada ugu fiican adduunka. Tani waa aasaaska filimkaan aan ku soo gabagabeyneyno booqashadeena filimada si aan u aragno ka hor inta aan aadin Paris.
Remy waa jiir u yimaada magaalada Seine si uu u fuliyo riyadiisa ah inuu noqdo cunto kariye weyn. Si tan loo sameeyo, waxaa loo soo bandhigayaa Makhaayada Gusteau, sanamkiisa weyn. Halkaas wuxuu kala shaqeyn doonaa weel dhaqe fudud si uu ugu abuuro maraqa ugu guusha badan Paris. Sidaas ayuu ku bilaabmayaa xiisaha jiirka kelida ah.
Waa a filim animation waxaa soo saaray Pixar waxaana la sii daayay 2007. In kasta oo agaasimaheeda uu noqonayo Jan Pinkava, ugu dambeyn way sameysay Brad Bird iyo, dubbinta, waxay lahayd jilayaal heer sare ah Peter O'Toole iyo majaajiliiste Patton Oswalt. Sidoo kale, abaalmarino kale oo badan, ayuu helay Oscar filimka ugu fiican ee animated. Ugu dambeyntii waa wax cajiib ah aragtida skyline ka yimid Paris taas waxaa laga arki karaa mid ka mid ah muuqaaladiisa.
Gabagabadii, waxaan soo jeedinay qaar ka mid ah filimada la arko ka hor intaadan aadin Paris si aad si fiican ugu barato caasimada Faransiiska. Si kastaba ha noqotee, kuwa kale oo badan ayaa sidoo kale lagula talinayaa. Tusaale ahaan, Charade, iyadoo Audrey Hepburn iyo Cary Grant ay dhex mushaaxayaan bangiyada Seine; Paris, paris, oo ay halyeeyadoodu qabsadeen tiyaatarka magaalada si ay u soo bandhigaan muusikadooda, ama Lama taabtaan, taas oo ina tusinaysa qiimaha saaxiibtinimada, laakiin sidoo kale dhibaatada haysata xaafadaha shaqaalaha ee magaalada weyn. Iyo, markaad aadid, inaad kudhaqaaqdo Magaalada Iftiinka, waad aqrin kartaa maqaalkan iyada oo talo ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Paris » Filimada la daawado ka hor intaadan aadin Paris